घररेलवे समाचारकिन विज्ञापनएउटा परिचय प्रकाशित गर्नुहोस्!
यो विज्ञापन र जानकारी को एक संयोजन हो। Advertorial शब्द संरचना "विज्ञापन" र "सम्पादकीय" को संयोजनबाट आएको हो। कुनै पनि उत्पादन वा सेवाको लागि विज्ञापन विज्ञापन गर्दा, यो लक्षित दर्शकहरूको साथ यो जानकारीमा पुग्नु हो। हामी ईन्टरनेट युगमा भएको हुनाले, काल्पनिक विज्ञापनहरूको सट्टा विज्ञापन विज्ञापन विकल्पले दुबै विज्ञापनकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दछ र दर्शकहरूलाई बढी लक्षित गर्दछ। त्यसकारण, विज्ञापन विज्ञापनको फिर्ताको दर एकदम उच्च छ।
होइन विज्ञापन प्रकार बयान शुल्क
3.1 दैनिक (१ टुक्रा) पाठ, दृश्य र लि ,्क, डोफलो ईन्डेबल पाठ £ 150
3.2 साप्ताहिक (pieces टुक्रा) पाठ, दृश्य र लि ,्क, डोफलो ईन्डेबल पाठ £ 400
3.3 मासिक (१२ इकाई) पाठ, दृश्य र लि ,्क, डोफलो ईन्डेबल पाठ £ 1.500
नमूना प्रचार लेख को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
प्रमोशनल लेखहरूमा लिंक अधिकतम be हुनुपर्दछ।
Photos फोटो वा १ भिडियो स्वीकार गरियो।
श्वेत पत्र प्रकाशित गर्दै
तपाईंको परिचय संचार @rayhaber.com तपाईं यसलाई हाम्रो ठेगानामा पठाउन सक्नुहुनेछ वा तपाईं तलको फोन नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
परिचय पत्र प्रकाशित भएपछि, प्रकाशनको लिंक ग्राहकलाई पठाइन्छ। चेक पछाडि उही दिन, भुक्तानी बैंक स्थानान्तरण वा PayPal भुक्तानीको रूपमा चार्ज गरियो।
भुक्तानी साप्ताहिक र मासिक प्याकेजमा अग्रिममा प्राप्त भयो।
होइन विज्ञापन प्रकार विवरण Price (per ad)
क्लिक गर्नुहोस् यहाँ for samples!
E-mail your advertorial to संचार @rayhaber.com or you can contact with us.
Aydınlı समाचार कोप कार खोलिएको लगातार प्रकाशन मा
RAYİHALE अन्तरराष्ट्रीय रेल प्रणाली निविदाहरु (विशेष खबरहरु)
मंत्री Yildırım व्हील लात संयंत्र प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ
प्रोमोशनल लेख को लागी एसईओ RayHaber
İsa Apaydınरिलिफ पत्रिकाको येरली रेलमा स्थानीय र राष्ट्रिय उत्पादन परिचालन ...
मन्त्री Arslan गरेको गर्न लेख Raillif "केन्द्रीय दर्ता संग टर्की गर्न केन्द्रीय बरन्डा" ...
निविदा सूचना: पैदल चलने वाला अंडरपास यहाहान स्टेशन मा
विशेषज्ञ सार्जेंट पोलट ओबुल पैदल यात्री ओवरपास परिचय